मधेसमा मिडिया | नेपाल इटाली डट कम
March 16, 2010 — nepalitaly
एक्काइसौँ शताब्दीमा मिडियाले संसारलाई एउटा कोठामा मात्र साँघुर्‍याएको छ । यो मानिसको ज्ञानको स्रोत मात्र बनेको छैन, नकारात्मकलाई निरुत्साहन र सकारात्मकलाई प्रोत्साहन दिने उपयुक्त माध्यम पनि बनेको छ । साँच्चै भन्ने हो भने मिडिया त्यस्तो सधान भएको छ, जसले हरेक किसिमले संसारकै उपयोगिता बढाएको छ । दिनप्रतिदिन सञ्चारक्षेत्रमा भएका नयाँनयाँ प्रयोगले समाज रूपान्तरण र विकासमा अतुलनीय भूमिकाखेलिरहेको छ । ०४६ पछि नेपालमा मिडियाको विकासले चरम चुली छोएको छ, तर संख्यात्मक विकासले गुणात्मक फड्को मार्न नसक्नु तीतो यथार्थ हो । मधेस, अझ पिछडिएको मधेसमा यसको जुन किसिमले प्रयोग भइरहेको छ, त्यसले मिडियाप्रति आमतराईवासीमा विश्वास जमाउन सकेको देखिन्न । पछिल्ला दिनमा मधेसमा मात्र होइन, सिंगो मुलुकमा मिडियामाथि आपराधिक थ्रेट र आक्रमणका घटना बढिरहेका छन् । मधेसमा त झन् यो विकराल नै देखिन्छ । मिडियालाई मधेसी समाजले बुझ्न नसक्दा पनि यो समस्या यहाँ बढी देखिन्छ ।
एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि मधेस बोक्सीप्रथा, दाइजोप्रथा, जातीय ध्रुवीकरणजस्ता विकृतिबाट मुक्त हुन सकेको छैन । झन् तस्करी र हिंसात्मक अपराध त खुला सीमाका कारण यहाँ मौलाइरहेकै छन् । खासगरी मधेसी जनताको चेतनास्तर माथि उठ्न नसक्नुले यस्ता विकृतिलाई बढावा दिइरहेको भन्न सकिन्छ । यस्ता विकृति नेपाली मिडियामा समाचार बनेर छाउँछन् अनि अबुझ समाजमा हुर्केको अपराधको निसाना बन्छन् मिडियाकर्मी । यसको पछिल्लो उदाहरण हो सिंघानिया हत्या प्रकरण । सञ्चारजस्तो निष्पक्ष र सर्वपक्षीय ज्ञानको स्रोतलाई विरोधी ठान्ने जुन माहोल छ, त्यसले सञ्चारकर्मीले झन्झन् असुरक्षा महसुस गरिरहेका छन् । त्यसैले अब मधेसी समाज र मधेसमा सञ्चारका विषयमा समीक्षा हुनैपर्छ । यी दुईबीच सकारात्मक सम्बन्ध कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भन्नेतिर सोच्न जरुरी छ ।
नेपाली मिडियाले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपले दायित्व निर्वाह गर्ने मौका ०४६ को परिवर्तनपछि मात्र पाएको हो । यद्यपि, त्यसअघि पनि यसले समाज परिवर्तनमा खेलेको भूमिका बिर्सन सकिन्न । समाज र मिडियाबीच अन्योन्याश्रति सम्बन्ध रहेकाले मिडियाबाट समाजले सकारात्मक समाचारको अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक होइन । तर, समाजमा रहेका विकृति-विसंगति र अपराधका विषय समाचारको विषय नै बन्नु हुन्न भन्ने कुनै समाजले अपेक्षा गर्छ भने त्यो मूढाग्रह मात्र हो । किनकि, विकृति-विसंगति अन्त्यका लागि पहिलो कदम त्यसलाई उजागर गर्नु हो, जुन नेपाली मिडियाले गरिरहेकै छ । अझ मधेसमा रहेका यावत् विकृति र आपराधिक गतिविधिलाई मिडियाले उजागर मात्र गरिरहेको छैन, सुधार्न मद्दतसमेत गरिरहेको छ । मधेसले मिडियाबाट यसको निरन्तरता र अझ विस्तारको अपेक्षा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तर, समाचार प्रकाशित गरेकै नाममा आपराधिक मनोवृत्तिले हेर्ने, धम्की दिने, आक्रमण गर्ने र मिडियाकर्मीको ज्यानसमेत लिने कार्य कदापि सामाजिक हुन सक्दैन ।
निश्चय नै मिडिया पनि सर्वगुण सम्पन्न छैनन् । मिडियाका पनि आप\_mना कमजोरी छन्, त्यो देखिएका पनि छन् । आर्थिक, सामाजिक र प्राविधिक अभावले पनि मिडियाले अपेक्षित कमजोरी सुधार्न नसकेको हुन सक्छ । अथवा सामाजिक वा राजनीतिक परिवेशले पनि मिडियाकर्मलाई प्रभावित गरेको हुन सक्छ । त्यसो भन्दैमा मिडिया नै बेठीक मान्ने र मिडियामाथि आक्रमण गर्ने कदम कुनै पनि नाममा कहिल्यै मानवोचित कार्य हुन सक्दैन ।
मधेसमा सबै मिडियाकर्मी सही छन् भन्ने पनि होइन । कति त केवल क्यामेरा बोकेर मिडियाकर्मी बनेका छन् । जसलाई सञ्चारको महत्त्व, भूमिका, उद्देश्य र समाजप्रतिको दायित्व थाहा हुँदैन, उसले कहिल्यै सही पत्रकारिता गर्न सक्दैन, न समाजका निम्ति कुनै योगदान नै गर्न सक्छ । यस्तै केही व्यक्तिका कारण मधेसमा मिडियाकर्मीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सफा छैन । सञ्चार मुलुककै चौथो अंग हो, यसको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मधेसी समाजले सिक्न जरुरी छ, उत्तिकै जरुरी छ मधेसमा यस क्षेत्रमा हामफाल्नुअघि सञ्चारको दुनियाँलाई राम्ररी बुझ्नु । कोही कसैको उपयोगका निम्ति सञ्चारकर्मी बनेको छ भने उसले कहिल्यै आमजनताको भलो गर्न सक्दैन ।
मधेसमा मात्र होइन, सिंगो मुलुकमा आज सञ्चारमाथि सुरक्षा थे्रट छ । दिनहुँ पत्रकार स्वयं समाचारका शीर्षक बनिरहेका छन् । आपराधिक समूहबाट ज्यान मार्ने धम्की दिने क्रम बढेको छ, तर सरकारले दोषी पत्ता लगाउन सकेको छैन । यस्तो हालतमा मधेसका मिडियाकर्मी थप सचेत बन्न जरुरी छ । समाजकै सुरक्षा र हकहितका निम्ति लड्ने कलम समाजबाटै डराएर हिँड्नुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म　? राज्यले यसतर्फ गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ ।
« Press release on Machine Readable Passport (MRP)
मेरो पालो कहिले आउला ? »